အကွိမျမြားစှာတိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲရန် 12 Tricks | ယင်း
7 ဒီဇင်ဘာ 2016
DevOps - အကွိမျမြားစှာသောမိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်း
အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသောမိုဃ်းတိမ်ကုန်သည်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေမျိုးသင့်ရဲ့တဦးတည်းများအတွက်စံပြအဖြေရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိုဃ်းတိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေး၏အားသာချက်များကိုတိုးပွားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအနည်းငယ်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်သူတို့အသီးအသီးစစ်ဆေးနေဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာသင်၏ခေါင်းကိုအပေါ်ကျန်ရှိသောနှင့်ကြက်ဥရှာဖွေနေစဉ်တစ်ခု aria သီဆိုဟုခေါ်တွင်စေခြင်းငှါအရာဖြစ်တယ်။ (ထိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအသုံးပြုပုံသို့သော်ကြောင့်လမ်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မဟုတ်။ )
ဤတွင်သင်၏အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီစဉ်သည့်အခါမှတ်မိဖို့ 12 အရာဖြစ်ကြ၏:
မြေတပြင်လုံး system ကိုဖျောပွပါနှင့်ထိုသို့မိုဃ်းတိမ်သည်အတွက်ကိုက်ညီရှိရာထိုနောက်မှခွဲခြား:စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ချက်များအတွက် crevices inlay မှရှိခြင်းကြဉ်ရှောင်ဖို့သင့်ယေဘုယျမူဘောင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်မိုဃ်းတိမ်ရဲ့အစိတျအပိုငျးတခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဓာတ်ပုံကိုရယူပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွဲပြားခြားနားလိုင်းများအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုပေးသွင်းခြင်းဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါမမြင်နိုင်တဲ့မှလျှင်မြန်စွာနှင့်အထူးလေးနက်စွာတုံ့ပြန်ကြောင်းကုန်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သငျသညျအတူတူမျိုးစုံသောမိုဃ်းတိမ်အုပ်ချုပ်ရေးဆွဲပြီးချုပ်ပေးရတယ်နေသည့်အခါမှီခိုမျှော်လင့်မထားတဲ့အခွအေနရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ကြံရာပါ၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေး, အဆင့်မြှင့်နှင့်အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၏အခြေအနေပေါ်ဆိုသလိုအစီရင်ခံရန်သင့်၏။
low-level အကဲခတ်များနှင့်ထောက်ခံမှုဆောင်ရွက်ချက် Mechanize ။ မိုဃ်းတိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးလက်ခံနောက်ကွယ်မှနှစ်ဦးကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရှင်းလင်းချက်ကုန်ကျစရိတ်ရန်ပုံငွေနှင့်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးပြီးမြောက်ဖို့တစ်ခုမှာချဉ်းကပ်ညညျးညူသင့်ရဲ့မူဘောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်လူ့ကြီးကြပ်၏အတိုင်းအတာလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေး၏အလားအလာမျက်နှာစာသဘောသဘာဝလုံးဝအတူတူချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ရပါမည်သောမြောက်မြားစွာအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းဒီ flowchart ထင်ရှားနေသည်။ ဤအ low-level စစ်ဆင်ရေး၏သိသာထင်ရှားသောအရေအတွက်ကသင့်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုးတက်လာဖို့ mechanized ရမည်ဖြစ်သည်။ ရင်းမြစ်: Carl P. Lehrmann, 451 သုတေသန
ယူ ပြီးနောက် သင့် client ။ သင့်ရဲ့ application များနှင့်မူဘောင်၏ "ဝယ်လက်" တကယ်အသုံးချဖို့ပစ္စည်းတွေချပြီးဘယ်လိုမှသတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ သူတို့ကလုပျထုံးလုပျနညျးအကြီးမြတ်ဆုံးထိရောက်မှုမြှင့နေသောရဲ့အကောင်းဆုံးထောက်ပြကြသည်။ သငျသညျထိုနည်းတူအားလုံးပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဒါ့အပြင်လျော့နည်း extravagantly, ထို client များသောသူတို့ကိုသူတို့၏အလုပ် speedier ဖြည့်စွက်ကူညီရှာတွေ့မဆိုအသစ်သောအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုသင် clients များနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်လတ်နေကြသည်တူရိယာများ၏အမြိုးမြိုးပျေါတှငျ-hop ရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆ။ သင်မမြင်နိုင်သောအရာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ မျိုးစုံကုန်သည်စီမံခန့်ခွဲသစ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း confuses ။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ကိုယ်သူတို့သကဲ့သို့ချက်နဲ့သောဝယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြံကိုကြံ, အထောကျအကူအသစ်သောအုပ်ချုပ်ရေး၏မြန်ဆန်ကွပ်မျက်ဖို့ပိုအတားအဆီးရှောင်ရန်။ သို့ရာတွင်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားသောအုပ်ချုပ်ရေးအထူးပထမဦးဆုံးညဥ့်အချိန် span ပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမသက်ဆိုင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်လျော့နည်း-အကုန်အကျရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ရှိမရှိအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှါထွက်လှည့်နေသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ထားသည်။
လျှောက်လွှာဘဝသံသရာသည်မိုဃ်းတိမ်လှုပ်ရှားမှု directing အပေါ်စောင့်ရှောက်။ ဆာဗာခြံ, မကောင်းသောအကြံအစည်စေခြင်းငှါ, သို့သော်သူတို့ဆက်ဆက်ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်ကြသည်မဟုတ်။ လုံခြုံရေး, တသမတ်တည်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော variable တွေကိုရေတွက်နိုင်နှင့်အတူဖော်ထုတ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အနည်းငယ်မူဘောင်လာနှစ်ပေါင်းအိမ်တော်၌ကျန်ရှိနေသောနေကြသည်။ သငျသညျသံသယမရှိမိုဃ်းတိမ်အကျိုးရှိဖို့အတွက်အိမ်သူအိမ်သားလျှောက်လွှာ, အသက်ရုံနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနှစ်နှင့်ဤလမ်းအတွက်သေးသူ့ဟာသူများအတွက်ပေးဆောင်မရှိသေးပေကြောင်းအထူးသဖြင့်တဦးတည်းရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုထူထောင်မူဘောင်တစ်ခု reexamination အဘို့ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ကြောင့် cloud-ဒေသခံသွားဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကာကွယ်ရေးန့ ်. ရန်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများပါပဲ။
၏အင်အား exploit Pre-emptable ကို virtual စက်တွေ။ သူတို့ 24 နာရီထက်မပိုတိုးချဲ့ဘို့ဆက်လက်ကတည်းက Pre-emptable VMs အားဖုတ်ကိုင်တွယ်များအတွက်လျောက်ပတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးနိုဝင်ဘာ 2016 ဆောင်းပါးထဲမှာ ComputerWeekly ရဲ့မဿဲ Cooter နှုန်းအဖြစ်, ဒဏ်ခံအစီအစဉ်များအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ pre-emptable VMs အား Google ရဲ့ပုံမှန်နမူနာထက်လျော့နည်းအကုန်အကျ 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သလောက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့၏အခြေချတန်ဖိုးကိုအကူအညီနဲ့အဖွဲ့အစည်းများစီစဉ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်။
ကို virtual အခြေအနေများများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ညှိနှိုင်း server ကိုလယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်ခင်တွယ်ပါ။ ဂျေး Litkey, Cloud အထူးကုအဖွဲ့အစည်းက Embotics ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အစပြုသဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ဤသည်, တစ်ဦးနိုဝင်ဘာ 21 အတွက်, သင်၏ဆာဗာစုဆောင်းထား, စုစည်း, လုံခြုံရေး, စစ်ဆင်ရေးနှင့် applications များအုပ်စုများ shared ရည်ရွယ်ချက်များဆီသို့တစ်ဦးတိုက်ပိတ်ယူနစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုအာမခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် 2016, Virtual မဟာဗျူဟာမဂ္ဂဇင်းအတွက်ဆောင်းပါး။ ဓလေ့ထုံးတမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်ကန့်သတ်န်းကျင်ဖွဲ့စည်းမဆိုအသင်းအဖွဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖောက်နဲ့ multi-သည်မိုဃ်းတိမ်အခြေအနေများမှပြောင်းရွှေ့အတူတိုက်ဖျက်ဖို့ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏အသင်းအဖွဲ့အတွက် applications များခွဲခြား များမှာ မိုဃ်းတိမ်ကို-ဒေသခံအသုံးပြုမှုအများဆုံးသင့်လျော်သော။ ဓလေ့ထုံးတမ်း applications များ, VMs အားအဖြစ်အပြေးမစောင့်, အစိုင်အခဲတွေဟာတစ်စကေး-up, အင်ဂျင်နီယာအသုံးချရန်နှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖန်တီးပေးပို့နှင့်တက်စောင့်ရှောက်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲရှိပါတယ်။ အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းအားဖြင့်, cloud-ဒေသခံ applications များတည်ရှိပြီးပိုပြီးချောင်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ကြောင်း, robotize ရွှေ့နှင့်စကေးတစ်စကေးထွက်ဒီဇိုင်းအလငျး၌အခန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏စုဆောင်းခြင်း, နဲ့ရိုးရိုးလည်းပါဝင်သည်။
မိုဃ်းတိမ်-ဒေသခံချဉ်းကပ်မှုကနေအများဆုံးအကျိုးမပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏အသင်းအဖွဲ့အတွက် applications များအာရုံစိုက်နှင့်ထွက်ရှိသောတစ်ဓလေ့ထုံးတမ်း server ကိုလယ်ယာဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အဖွဲ့အစည်းကဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသောသူတို့ကိုမှတက်ရောက်ကြပါတယ်။ ရင်းမြစ်: TechTarget
သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုမှကစားသောအုပ်ချုပ်ရေးရန်သင့် application များကို Coordinate ။ ကြီးမားအမည်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပမာ, VMware နဲ့ AWS ကသူတို့ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ bifurcated ပါပြီ။ ဥပမာ, VMware ၏ vSphere-based လုပ်ငန်း Hybrid ကိုတိမ်တိုက်ဓလေ့ထုံးတမ်း application များအတွက်မျှော်လင့်ရသည်ကို၎င်း, အဖှဲ့အစညျး၏ဇာတိ Hybrid ကိုတိမ်တိုက်တိုင်းတာ, microservice-based မူဘောင်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမှန်ကတော့, အဖွဲ့အစည်းဒါ့အပြင်ပိုပြီးမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုအုပ်ချုပ်ရေးမရင်းနေချိန်မှာ AWS ရဲ့ elasticity Compute တိမ်တိုက်, elasticity Block Store မှာ, EFS နဲစာရွက်စာတမ်းမူဘောင်များနှင့် VPC ပုဂ္ဂလိကစနစ်များ, In-အိမ်သူအိမ်သား server ကိုခြံ mirror ဥပမာ, NoSQL databases ကို, BI ကိုင်တွယ်, Hadoop ကဲ့သို့ခိုင်, မက်ဆေ့ခ်ျကို လိုင်းများ, တွန်းအားပေးအသိပေးစာအုပ်ချုပ်ရေး, မီဒီယာ transcoders နဲ့ web အညွှန်းကိန်း။
crosswise သည်မိုဃ်းတိမ်အခြေအနေများကျော်စက်ရုပ်အစီအစဉ်။ မျိုးစုံသောမိုဃ်းတိမ်အုပ်ချုပ်ရေး၏အသုံးချနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဓိကကျွမ်းကျင်လမ်းတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးဆက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းအစီအမံများအတွက်တိုက်ပိတ်စံရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုက virtual ဆာဗာများ, ပမာဏ, သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်, လှုပ်ရှားမှုစီး, တသမတ်တည်း / ထိန်းချုပ်မှု, အစီရင်ခံနှင့်လုံခြုံရေးကဲ့သို့သောပ္ပံကိုဖုံးလွှမ်း။ သင်တိုးတက်ရေးပါတီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေအပြစ်ကင်းစင်စွာပေးသွားနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ crosswise အမျိုးမျိုးသောမူဘောင်ကိုကျော်တဲ့တိုက်ပိတ်အစီအစဉ်ရှိတဲ့အခါအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများလျှောက်ထားရန်ထိုနည်းတူလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများပါပဲ။
ရောင်းချသူလုံခြုံသဖြင့်ကွယ်ပျောက်အကြိမ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုသို့လှည့်။ သင်တဦးတည်းပွင့်လင်းသောမိုဃ်းတိမ်အကျိုးကျေးဇူးအပေါ်လုံးဝမှီခိုသောအခါ, အခြားအုပ်ချုပ်ရေးမှကို virtual စက်တွေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အစိတျအပိုငျးများထဲတွင် perused ဆင်တူ / ဝန်, သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်စနစ်ကအစွမ်းမဲ့ compose ။ နည်းဗျူဟာများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုဝေမျှအားလုံးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေး, သင်တို့၏ထုံးစံရောနှောအပေါ်မဟုတ်ဘဲ မူတည်. ဖြင့်, သင်သည်ပြောင်းလဲမှုထက်ပြောင်းလဲမှုကိုသင်ကြီးကြပ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတက်လေ။